Cod laga xaday oo lagu ogaaday nooca ciyaaryahan ee uu yahay Laacibka Manchester United ee Bruno Fernandes! – Gool FM
Cod laga xaday oo lagu ogaaday nooca ciyaaryahan ee uu yahay Laacibka Manchester United ee Bruno Fernandes!
(Manchester) 25 Mar 2020. Kooxda Manchester United ayaa baahi daran oo dhanka saxiixyada ah baadi goobeysay intii uu furnaa suuqii Janaayo, iyagoo ugu dambeyn soo helay bartilmaameedkoodii Bruno Fernandes.
Red Devils ayaa u muuqatay xilligaas mid ku dhammeysan karta 10-ka hoose ee kala sarreynta horyaalka Premier League-ga iyo inaysan u soo bixi karin tartammada Yurub.
Inkastoo uu hadda horyaalka xanniban yahay, haddana Man United waxay la soo baxday qaab ciyaareed wanaagsan, iyagoo guuleystay toddobo ka mid ah 10-kii kulan ee ugu dambeeyay dhammaan tartammada.
Fernandes ayaa helaya ammaanta ugu badan ee guulaha kooxda Old Trafford ku ciyaarta, waxaana sidoo kale uu saameyn fiican ku yeeshay qolka lebiska iyo waaxaha kale ee naadiga.
Waxaa la helay codad la xaday oo uu WhatsApp-ka ku diray laacibka reer Portugal, isagoo ciyaartoyda kooxdiisii Sporting Lisbon ku eedeynaya qaab ciyaareedkooda liita.
Majaladda Bortuqiiska ah ee Record ayaa baahisay Bruno oo leh: “Walaal, waxba ma oranayo! Daacaddii, haddii aad dooneysaan inaan wax idiin sheego, waxaan doorbidayaa inaan waxba dhihin.
“Ani si xun ayaan u arkaa hab dhaqanka qaar ka mid ah ciyaartoyda, xaqiiqdii ma cadda dhaqankooda, waa dhaqan aanan jirin.
“Waxaa jira ciyaartoy aanan hab dhaqan fiican lahayn, walaal, ma rabaan inay halkaan sii joogaan.” ayuu yiri Fernandes oo eedeynaya qaar ka mid ah xiddigihii ay isku kooxda ahaayeen.
Waxa uu sidoo kale isagoo careysan tilmaamay inay iska baxaan haddii aysan dooneyn u ciyaarista kooxda, maadaama ay sanadka oo dhan lacag qaataan, si fiicanna inaysan u ciyaarin tahay mid aanan wanaagsaneyn.
Kubad-sameeyahii hore ee kooxda Sporting CP ayaa ka kululaaday guuldarro kooxdiisa ku soo gaartay garoonkooda, waxaana dabiiciyan uu leeyahay damiir aad u neceb guuldarrada.
Sida Wargeyska Daily Mail ay warrinayso, Fernandes ayaa qaatay masuuliyadda codkaas la xaday, waxaana firfircoonida iyo agaasinka la cajabay tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola, kaasoo ilgaar ah u lahaa kulanka Manchester Derby.
25-sano jirkan ayaa dhex-gal wanaagsan ku yeeshay durba kooxda Manchester United, welina waxa uu leeyahay tayadii hoggaamineed iyo damiirkii noolaa ee ku hooggaaminayay kooxda Sporting Lisbon.
Madaxweynaha xiriirka kubadda cagta Spain oo shaaca ka qaaday xaallada kaliya uu dib ugu soo laaban karo horyaalka La Liga
“Neymar Jr wuxuu ka fiican yahay xitaa Lionel Messi” – Halyey hore xulka qaranka Brazil ah